Tandremo Ry Mpanaratsy Bikan’olona: Tsy Hiraharaha Izany Intsony Ireto Vehivavy Pakistaney Ireto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2016 8:18 GMT
Miady amin'ny Fampahamenarana Bika ao amin'ny Books n’ Beans ao Lahore. Sary nindramina tao amin'ny pejy Facebook Bully Proof (Porofom-panindriana)
Miady amin'ireo mampahamenatra ny vatana amin'ny alalan'ny fikarakarana fivoriana miaraka amin'ny mpianatra sy mizara ny tantaran'ireo tovovavy miaro tena amin'ny herisetram-panindriana, indray ankehitriny, ilay mpisolovava sady mpikatroka Zainab Chughtai, mpanorina ny BullyProof- fanentanana ara-tsosialy hoentina hisorohana ny fampijaliana eny amin'ny sekoly Pakistaney, .
Niparitaka be ny lahatsary iray tamin'ny Facebook mampiseho tovovavy mizara ny tantara andavanandro momba ny fampahamenaram-batana. “Efa nijery ny fomba fatorinao ve ianao? Tena ratsy be ianao,” hoy ny vehivavy iray nitatitra fa izany no nambara taminy. “[Amin'ny] maha 14 taona, tsy maintsy mandre fanehoan-kevitra [aho] fa tsy hisy hangata-bady,” hoy ny hafa manampy.
Nisy fotoana tao amin'ny lahatsary, nizara tantara mahavaky fo i Chugtai tenany: “Nolazaina tamiko fa tokony atao lalina kokoa ny fasana hohadiako ho ahy,” hoy izy, mihazona ny ranomasony. Niaiky ny vehivavy iray hafa fa niharan'ny teny mahatonga tebiteby teo amin'ny taona mamparefo azy fony 15 taona noho ny fampahamenaram-batana nahazo azy: “Nentina tany amin'ny hopitaly aho, ka nahita izy ireo fa tratran'ny hyperthyroïdie (fahabetsahan'ny hormona) aho, aretin'ny fiovam-batana (metabolisma) noho ny fahazoako lanja tafahoatra. “
Niteraka valinteny avy amin'ireo tovovavy miatrika zavatra tahaka izany ihany koa ny fijoroana vavolombelona manokana nataon'ireo vehivavy miseho ao amin'ny lahatsary. Syeda ShahBano Ijaz nizara ny fomba nanampiany ny zanany vavy mba handresy ny olan'ny bikan'ny vatana.
Zainab Chughtai: tsy tsapanao fa tena mahafinaritra izao. Maniry aho mba manana anjara amin'izany – satria tena ratsy ho ahy amin'ny maha ankizy ity fampahamenarana ny vatana ity. Miezaka araka izay azoko atao aho mba hiantohana fa tsy miraharaha momba endriky ny vatany ny zanako vavy […] fa tokony hanaja ny vatany izy. Hitako fa ngezabe ny feny ary fantatro fa hanana olana foana izy rehefa mividy pataloha saingy tiako izy mba TSY hiraharaha izany. Tena tolona lavitr'ezaka ny anay.
Tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, notsikerain'ireo olom-pirenena sy mpisolovava mpanohitra ny Minisitry ny Fiarovana Pakistaney, Khawaja Asif raha nanao fanamarihana manambaty vehivavy tamin'ny solombavambahoaka namany Shireen Mazari. Nikasa hanampim-bava an'i Mazari nandritra ny adihevitra tao amin'ny parlemantera tao anatin'ny fahatapahan-jiro i Asiv, hoy izy tao anatin'ny fikasana hampahamenatra ny vatany: “Misy olona afaka mampangina ity sarety traktera ity ve.” Nampiany hoe, “Ataovy ho an'ny vehivavy kokoa ny feony.” Niteraka fahatezerana ny fanambaran'i Asif ary avy eo voatery niala tsiny izy, nampiseho ny toe-tsainy fa matetika ampiasaina hanampenam-bava ny vehivavy ny fampahamenaram-batana.
Mpiantsehatra mijoro i Faiza Saleem nizara ny zavatra niainany amin'ny fiadiana ny fampahamenarana ny vatana tamin'ny alalan'ny hatsikana:
Tsy mbola nanana traikefa tsara kokoa noho izany aho teo amin'ny fiainako. Mbola olana akaikin'ny foko ny fampahamenaram-batana, raha resahana ny lohahevitra saro-pady tahaka izany fa natahotra aho fa mety hahatonga ny mpihaino tsy hahazo aina (tsy tahaka ny fampahamenaran'ny rehetra ny matavy) izany. Na izany aza, nijoro teto aho miaraka amin'ny fanohanan'ireo vehivavy sivy mahafinaritra, tsy mba nahatsiaro faly toy izany aho na dia nihomehy sy nihoraka isaky ny andalana lazaiko aza ny vahoaka. Ary raha nitsangana teo amin'ny sezany izy ireo mba hilaza amiko fa azon'izy ireo ny tiana ambara, dia hitako fa sarotra ny nihazona indray ny ranomasoko. Tafatambatra, MITSANGANA izahay! Ho amin'ny hatavezako, amim-pitiavana, tamin'ity indray mitoraka ity.
Ny fanentanana ataon'i Chughtai dia manohitra ny fanalàna baraka mahazo ny vehivavy momba ny bikan'izy ireo amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tanora vehivavy sy ny lehilahy momba ny herisetram-pampijaliana, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny fampahamenarana ny vatana. Hoy izy nanazava:
Manaiky ny vatantsika manokana indray isika, ary manana ny volon-koditra antsika manokana. Ampy antsika izay, ampy ahy izay. Fanombohan-javatra tsara ity, ary voalohany amin'ireo fiaikena maro mbola hoavy tahaka izany.